लाम–रिम मार्गक्रमको पारम्परिक प्रस्तुति — Study Buddhism
अमूल्य मानव जन्मका रूपमा पाइएको यो एकदमै अद्भूत अवसरलाई स्मरण गर्दै हामी बोधिप्राप्तिको क्रमिक मार्ग लाम–रिमको अभ्यासमा अग्रसर हुन्छौं। यो अवसरको पूर्ण सदुपयोग गर्ने हो भने हामीले भविष्यमा पनि यस्तै जन्म पाउने मात्र होइन, निर्वाण र पूर्ण बोधि नै प्राप्त गर्न सक्नेछौं। यो सबै हामीले आफ्नो प्रेरणा र लक्ष्यलाई कति विशाल बनाउँछौं तथा बुद्धद्वारा प्रतिपादित धर्मको कुन गहिराइसम्म पुगेर अभ्यास गर्छौं भन्नेमा निर्भर गर्छ।
अमूल्य मानव पुनर्जन्म
प्रेरणाका दुई निम्नस्तर
प्रेरणाको उन्नत स्तर
यसै जीवनकालमा बुद्धत्त्व प्राप्त गर्नु
किन अमूल्य मानव पुनर्जन्मलाई चिन्तामणिसँग तुलना गरिन्छ
हामीलाई प्राप्त यो अमूल्य मानव पुनर्जन्म सबै इच्छा पूर्ति गरिदिने चिन्तामणिभन्दा बढी अनमोल छ। यसबाट हामीलाई विशिष्ट सुविधाहरू (क्षणहरू) प्राप्त छन्। ती सुविधा (क्षण वा अवसर) लाई हामीले लागूऔषध सेवन गरेर बेहोशीमा नष्ट गर्न होइन बरू धर्मको अभ्यासमा उपयोग गर्नुपर्छ। यो बहुमूल्य मानव शरीरलाई इच्छापूर्ति गरिदिने चिन्तामणिभन्दा मूल्यवान किन भनिएको हो? किनभने चिन्तामणिले त केवल अहिलेको एक जन्मका लागि भोजन–पानी आदिको आवश्यकता पूरा गरिदेला, भविष्यका जन्मको लागि त्यसको कुनै उपयोगिता हुँदैन। तर हामीसँग यो जुन मानव शरीर छ, त्यसले धर्म अभ्यासका लागि अवसर दिन्छ, त्यसैले यो जुनसुकै मणिभन्दा बढी मूल्यवान छ।
हामी सबै सधैँभरी र सकेसम्म लामो समयसम्म टिक्ने सुख चाहन्छौं। तर यो जीवनकालका लागि जति नै सुख प्राप्त गरे पनि त्यो अल्पकालीन हुनेछ, किनकि त्यो अहिलेको जीवनकालभरी मात्र रहन्छ। त्यसैले सुखको निरन्तरता चाहने हो भने हामीले भविष्यका जन्महरूको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। कुनै पनि चिन्तामणिले हामीलाई निकृष्ट लोकहरूमा पुनर्जन्म हुनबाट बचाउन सक्दैन, न त हामीलाई अमरत्व नै प्रदान गर्न सक्छ। तर यो मानव शरीरलाई आधारभूमि बनाएर साधना गर्ने हो भने हामी निकृष्ट लोकमा पुनर्जन्म हुनबाट बच्न सक्छौं। जेचुन मिलारेपाले जस्तै यसलाई धर्मअभ्यासको आधारभूमि बनाउने हो भने हामी एकै जीवनमा पनि पूर्ण बोधि प्राप्त गर्न सक्छौं। यसरी यो अमूल्य मानव शरीरले प्रदान गर्ने अवसर चिन्तामणिले पनि दिन नसक्ने भएकाले यो चिन्तामणिभन्दा मूल्यवान छ।
त्यसैले यो मानव शरीरको सदुपयोग गरेर हामीले धर्मको अभ्यास गर्नुपर्छ। तर हामी अक्सर यसको विपरीत काम गरिरहेका हुन्छौं। चिन्तामणिभन्दा मूल्यवान भएपनि यो शरीरलाई हामी बढीभन्दा बढी धन संग्रह गर्ने काममा व्यस्त राख्छौं र त्यस्तै अल्पकालीन उद्देश्यका लागि आफ्नो ज्यानै खेर फाल्नसम्म तत्पर हुन्छौं। यो संसारमा कैयौं मानिस हामीभन्दा धेरै धनधान्य र बुद्धिले सम्पन्न छन्। तर आफूसँग भएको यो अमूल्य मानव जीवनको उपयोग गरेर हामी धर्मको अभ्यास गर्न सक्छौं र तिनीहरूले भन्दा बढी सकारात्मक उर्जा (पुण्य) को सञ्चय गर्न सक्छौं। यो अमूल्य मानव जीवनलाई खेर फाल्नु हुँदैन। यसलाई तीनवटा लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपयोग गर्नुपर्छः भविष्यमा हुने पुनर्जन्मलाई सुधार्ने, निर्वाण प्राप्त गर्ने, र बुद्धत्व प्राप्त गर्ने।
हामीसँग जतिसुकै भौतिक सुखसाधनका वस्तु भएपनि तिनले दीर्घकालीन सन्तुष्टि प्रदान गर्न सक्दैनन्। कुनै मानिस यो संसारका सबै भौतिक सम्पत्तिको मालिक बन्यो भने पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैन। त्यसैले चिन्तामणिले पनि हामीलाई सन्तुष्टि दिन नसक्ने कुरा पक्का छ। जति धेरै धन जम्मा गर्यो, त्यत्ति धेरै समस्या पनि उत्पन्न हुन्छन्। यो तथ्यको थोरबहुत अनुभूति हामी सबैले गरेका हौंला। मानिलिऊँ, तपाईं बस वा ट्रेनमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईंसँग ज्यादै धेरै सामानहरू छन्। त्योबेला तपाईंको यात्रा सजिलो हुँदैन। सामानको भारी कम भयो भने मात्र तपाईंको यात्रा सजिलो हुन्छ।
हामीले धर्मको अभ्यास यसरी नै आफूलाई हलुका राखेर गर्नुपर्छ। जेचुन मिलारेपाको उदाहरण लिने हो भने उहाँको गुफामा कुनै भौतिक सम्पत्ति थिएन। जेचुन मिलारेपा र शाक्यमुनि बुद्ध दुवैले भौतिक सम्पत्ति ज्यादै गौण र सारहीन छन् भन्ने बोध गरेर तिनलाई छाडी धर्मको अभ्यास गर्नुभयो। तपाईंहरू पनि विश्वका विभिन्न सम्पन्न देशका बासिन्दा हुनुहुन्छ। तपाईंहरू पनि भौतिक सम्पत्ति धेरै महत्त्वपूर्ण छैनन् भन्ने बोध गरेर तिनलाई त्यहीँ छाडी धर्मको अभ्यास गर्न यहाँसम्म आउनुभएको छ।
अमूल्य मानव जन्म प्राप्त हुनुका कारण (हेतु) र कठिनाइ
यो मानव शरीर प्राप्त गर्न किन कठिन छ भन्ने जान्नुपर्छ। यो कठिन छ, किनभने यसका हेतुहरू जुट्न कठिन छ। यसका हेतुलाई मुख्यतः तीन श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छः
नैतिक आत्म–संयम (शील) को कडाइका साथ पालना
शीलको कडाइका साथ पालना
नैतिक आत्म–संयम (शील) को कडाइका साथ पालना गर्नु एकदमै कठिन छ। अरूले पालना गर्ने शीलका बारेमा जान्न र त्यसको मूल्यांकन गर्न पनि कठिन छ। शील पालनाका सन्दर्भमा हामीले दश विनाशात्मक व्यवहार (अकुशल कर्म) का बारेमा जान्नुपर्छ। यो संसारमा धेरै मानिसलाई त ती अकुशल कर्म के हुन् भन्ने नै थाहा हुँदैन। जसलाई थाहा छ, तिनले पनि ती अकुशल कर्मबाट टाढा रहने प्रयत्न गर्दैनन्।
दशमध्ये तीन अकुशल कर्म शरीरसँग सम्बन्धित छन्ः
अरूको जीवन हरण गर्नु (प्राणातिपात) – मार्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन सक्छ, तैपनि कुनै किराले टोक्यो भने अनायासै त्यसलाई प्याट्ट हिकाउँछौं र मार्छौं।
आफूलाई नदिएका कुरा लिनु (अदत्तादान) – कतै गएर ठूलै चोरी त हामी नगरौंला, तर अरूसँग भएको चीज प्राप्त गर्न अनेक धूर्त्याईं गर्न सक्छौं। त्यो पनि चोरी जस्तै हो।
अनुपयुक्त यौन व्यवहार (काममिथ्याचार) – अरूको पार्टनरसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने चाहना राखेका हुन सक्छौं।
जसरी पानी परेका बेला घरबाहिर निस्कँदा पानीका थोपाहरू हाम्रो शरीरमा परिरहन्छन्, त्यसरी नै शरीरसँग सम्बन्धित यस्ता अकुशल कर्मको संग्रह हामी गरिरहन्छौं।
वचनसँग सम्बन्धित चार अकुशल कर्म छन्ः
झूठो बोल्नु (मृषावाद) – यो त हामी सधैँ गरिरहन्छौं। उदाहरणका लागि हामीलाई पहाडमा ओरालोतर्फ हिँड्नु छ तर कसैले सोध्यो भने उकालो जाँदैछु भनिदिन्छौं।
विभाजनकारी कुरा गर्नु (पैशुन्य) – मित्रहरूबीच फाटो ल्याइदिने कुरा गर्नु र पहिल्यै नराम्रो सम्बन्ध भएकाबीच झन् शत्रुता बढाइदिने काम गर्नु। अरूका बारेमा नराम्रो कुरा गरेर हामी यस्तो कर्म सधैँ गरिरहेका हुन्छौं।
रुखो बोली बोल्नु (पारुष्य) – यो चाहिँ मानिसका हकमा मात्र गर्दैनौं। कुनै कुकुर हाम्रो कोठाभित्र पस्यो भने त्यसलाई गाली गर्छौं – “भाग्! बाहिर निस्किहाल्!” हामी रुखो बोली बोल्छौं। यसरी अपमानजनक र रुखो बोली बोल्नु एकदमै नराम्रो हो। अरूले हामीप्रति यसरी रुखो बोल्दा हामीलाई पीडा दुख्छ। त्यस्तै हामीले बोल्दा अरूलाई पीडा हुन्छ। यस्तो पीडा जनावरले पनि अनुभव गर्छन्।
अनावश्यक बकबक, व्यर्थको गफ (सम्भिन्नप्रलाप) – हाम्रो मुखबाट निस्कने अधिकांश बोली अनावश्यक बकबक नै हुने गर्छ। जस्तै, “म त्यो देश घुमिसकेको छु,” “मैले त्यो काम गरिसकेको छु।” तपाईं धेरै बोल्नुहुन्छ भने वचनसँग सम्बन्धित यस्तो अकुशल कर्म गर्ने सम्भावना धेरै बढेर जान्छ। मलाई अंग्रेजी आउँदैन, त्यसैले अंग्रेजीमा अनावश्यक बकबक गर्ने मौका मिल्दैन। म तिब्बती भाषामा मात्र बकबक गर्छु!
चित्तसँग सम्बन्धित अकुशल कर्म तीनवटा छन्ः
लोभी चित्तले सोच्नु (अभिध्या) – कसैको एकदमै सुन्दर घर देख्यो भने त्यो वा त्यस्तै आफ्नो भैदिए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा राख्नु, त्यसैको ध्याउन्नमा रहनु र कसरी त्यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउनु। यो राम्रो कुरा होइन, तर हामी सबै यस्तो धेरै गर्छौं।
दुर्भावनायुक्त विचार राख्नु (व्यापाद) – अरूले दुःख पाउन् वा उनीहरूको गर्धनै भाँचियोस् भन्ने खालको इच्छा राख्नु। हामी शत्रुका लागि मात्र यस्तो सोच्दैनौं, कहिलेकाहीँ मित्रले सतायो भने उसका लागि पनि त्यस्तै नराम्रो सोच्छौं।
विकृत विचार राख्नु (मिथ्यादृष्टि) – उदाहरणका लागि, भविष्यमा पुनर्जन्म हुँदैन भन्ने सोच्नु वा त्रिरत्नको शरणमा गएर कसैको हित हुँदैन भन्ने सोच्नु, वा पूजाविधिहरू गर्नु भनेको समयको बर्बादी हो, घिउको दियो बाल्नु घिउको बर्बादी हो, तोर्मा चढाउनु भनेको चाम्पा (जौको सातु) खेर फाल्नु हो जस्ता विचार राख्नु।
यस्ता काम गर्नबाट आफूलाई रोक्न कठिन छ। र यसरी आफूलाई रोक्न सकिएन भने फेरी अनमोल मानव जुनी पाउन सकिँदैन। यसबारे धेरै विस्तारपूर्वक चर्चा गर्न अहिले समय पर्याप्त छैन। यसको गहिराइमा जाने चाहना भए लाम–रिमको शिक्षा लिनुहोला।
मानव जुनी प्राप्त गर्नका लागि दोश्रो हेतु ६ पारमिताको अभ्यास हो। ती ६ पारमिता यसप्रकार छन्ः
वीर्य (दृढ उत्साह)
तर दानको अभ्यास गर्नुको साटो हामी कञ्जुस्याईंको अभ्यास गर्छौं र अरूलाई आफ्नो दरिद्री स्वभाव देखाउँछौं। धैर्यको होइन, रिसको व्यवहार गर्छौं। वीर्य (दृढता) को अभ्यास गर्दै नायकले जस्तो उच्च उत्साहले काम गर्नु र धर्मको अभ्यासमा रमाउनुपर्नेमा हामी अल्छीका राजा बन्छौं र हरक्षण निद्रामै व्यतीत गर्न खोज्छौं। ध्यानमा मानसिक एकाग्रता विकास गर्नुपर्नेमा हामी मानसिक चञ्चलताको विकास गर्छौं। उदाहरणका लागि, एकातिर मन्त्रको उच्चारण गर्दै हुन्छौं, अर्कातिर हाम्रो मन संसार भ्रमणमा निस्केको हुन्छ – मनलाई यस्तै अस्थिर बनाइराख्ने परिस्थितिको निर्माण हामी गरिरहन्छौं।
एकजना शिक्षक थिए जसको मन यस्तै चञ्चल थियो। अभ्यास गरिरहेको बेला झल्याँस्स सम्झिन्थे – मैले फलानो चेलालाई फलानो काम अह्राउनु थियो, भुसुक्कै बिर्सेंछु। यस्तो सम्झना आउनासाथ ध्यानको बीचमा जुरुक्कै उठ्थे र चेलालाई गएर काम अह्राउँथे। यस्तो अस्थिर मन उनको थियो। मन्त्र साधना गर्दा हाम्रो मन पनि यसैगरी डुलिरहन सक्छ।
प्रज्ञा पारमिताको हकमा, हामीले शून्यता बोध गर्नसक्ने प्रज्ञाको अभ्यास गर्नुपर्छ। तर हामी सांसारिक कुराहरू (जस्तै चित्रकारिता आदि) को अध्ययनमै तल्लीन हुन्छौं। यसबाट हामी सही ज्ञानको विकास गर्दैनौं।
संक्षेपमा भन्दा, मानव जुनी पाउने हेतुहरू जुटाउनु एकदमै कठिन छ। मानव शरीर पाउन यति कठिन छ भन्ने जानेपछि यो एकपटकलाई पाइएको छ, यो एकदमै अस्थायी छ र ज्यादै सजिलैसँग गुम्न सक्छ भन्ने स्मरण गर्नुपर्छ। आफूलाई प्राप्त यो अमूल्य मानव जीवनको हामीले उपयोग गरेनौं भने फेरी यस्तै जीवन भविष्यमा पाउन मुस्किल हुनेछ।
शुद्धतापूर्वक गरिएको शील पालना र ६ पारमिताको अभ्यासलाई पूर्णता दिन हामी भविष्यमा पनि मानव जीवन नै पाइयोस् भन्ने प्रणिधान गर्छौं। यसको अर्थ यो होइन कि हामी “हे बुद्ध, म असल केटी वा असल केटा हुँ भने मलाई मानव जुनी दिनुस्, म सधैं तपाईंको गुन मान्नेछु” भन्दै प्रार्थना गरौं। यसको अर्थ के हो भने हामी आफ्नो आशय र सकारात्मक उर्जालाई प्रबल गति प्रदान गरौं, र पुनः मानव जीवन नै प्राप्त गर्ने आकांक्षाका साथ अभ्यास गरौं।
तर यस्तो आकांक्षा स्पष्ट हुनुपर्छ, नत्र काम बन्दैन। तिब्बतको गान्देन गुम्बामा गान्देन गद्दी थियो, जसलाई गेलुक्पा सम्प्रदायको सबैभन्दा उच्च आसन मानिन्छ। गुम्बामा अनेक जनावरहरू पनि हुन्थे। एक दिन एउटा गाई भित्र पस्यो र उक्त गद्दीमा गएर सुत्यो। लामाहरू आश्चर्यचकित भए र त्यहाँका एक ठूला गुरुलाई सोधे, “यसको अर्थ के हो?” गुरुले बताउनुभयो, “कुनै पूर्वजन्ममा उसले गान्देनको गद्दीमा बस्न पाउने प्रार्थना गरेको थियो। तर उसको आकांक्षा त्यति स्पष्ट हुन सकेको थिएन।”
आठ अक्षणबाट मुक्ति
अमूल्य मानव जीवनको एक विशेषता के हो भने यो आठ अक्षणबाट मुक्त छ। अर्थात् केही समयका लागि यो आठ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाबाट मुक्त छ। अक्षण भनेको त्यस्तो अवस्था हो जहाँ धर्मको अभ्यास गर्न सम्भव हुँदैन।
ती आठमध्ये चार मनुष्य लोकबाहिरका अवस्था हुन्ः
दुःखपूर्ण नरकलोक – हाम्रो जन्म दुःखपूर्ण नरकलोकमा भएको भए हामी आगोले पोलेकोजस्तो अवस्थामा हरक्षण तडपिरहने थियौं, त्यसैले धर्मको अभ्यास सम्भव हुने थिएन।
अतृप्त प्रेतलोक – प्रेतलोकमा जन्मेका भए हामी सधैँ अतृप्त रहने थियौं र सधैँ खानेकुराको ध्याउन्नमा मात्र रहने थियौं।
मानिलिऊँ, हामी विहान उठ्यौं तर विहानको खाना खान पाएनौं। त्योबेला धर्म अभ्यास गर्न मन लाग्दैन। उठ्दाखेरी टाउको दुखिरहेको छ, धर्म अभ्यास गर्न मन लाग्दैन। त्यस्तै, अतृप्त प्रेतका रूपमा जन्मिएका छौं र ६० वर्षसम्म खान नपाई भौंतारिएका छौं भने धर्म अभ्यास गर्न मन लाग्ने कुरै भएन। धन्नले हामी दुःखैदुःख मात्र हुने नरकलोकमा वा कहिल्यै तृप्ति हुन नसक्ने प्रेतलोकमा जन्मिएर फँसेनौं। त्यसैले हामी भाग्यमानी छौं। यो कुराप्रति हामीले गर्व गर्नुपर्छ।
तिर्यक (पशु) लोक – पशुलोकमा जन्मिएका भए परम पूजनीय दलाई लामाकै कुकुर भए पनि हामीले शरणगमनको पाठ गर्न सक्ने थिएनौं। त्यस्तो अवस्थाबाट बचेकोमा हामी भाग्यमानी छौं।
दीर्घ जीवनयुक्त देवलोक – दीर्घ जीवनयुक्त देवलोकमा जन्मिएका भए भौतिक सुखैसुखले घेरिएर धर्मको अभ्यासमा रुचि जाग्न सक्ने थिएन।
शारिपुत्रका एक चेलाले उनीप्रति प्रबल “गुरु–भक्ति” प्रकट गर्दै आफूलाई पूर्ण समर्पित गरे। चेलाको मृत्युपछि उनको जन्म देवलोकमा भयो। शारिपुत्रले आफ्नो अभिज्ञाबलको प्रयोग गर्दै चेला देवलोकमा जन्मेको कुरा जाने। त्यसैले शारिपुत्रले त्यहीँ गएर उनलाई सहयोग गर्ने विचार गरे। तर जब उनी त्यहाँ पुगे, चेलाले केवल “हाई!” भनेर अभिवादन गरे र आफ्नो मोजमस्तीमै व्यस्त भए। न उनलाई गुरुको मतलब भयो, न धर्म अभ्यासको।
हामी आफ्नै अनुभवले पनि यो जान्न सक्छौं। कोही मानिस गरीब छ भने उ धर्म अभ्यासका लागि राजी हुन सक्छ। तर उ धनी भयो र सुखसुविधाले सम्पन्न भयो भने उसलाई रुचि नहुन सक्छ। हामी दीर्घ जीवनयुक्त देवता भएर जन्मिएनौं, यो एकदमै भाग्यको कुरा हो।
त्यस्तै मनुष्य लोकसँगै सम्बन्धित चार अक्षण छन्। ती हुन्ः
बुद्ध शिक्षाको अभाव भएको ठाउँमा जन्मिनु – कतिपय मानिस त्यस्तो देशमा वा कालखण्डमा जन्मिन्छन् जहाँ बुद्धको एक वचन पनि सुन्न पाईंदैन। हामी त्यस्तो अवस्थाबाट बचेका छौं।
बार्बरिक समाजमा (म्लेच्छ भएर) जन्मिनु – त्यस्ता देशमा हामी जन्मेका छैनौं जहाँ मानिसहरू केवल खानेकुरा वा लत्ताकपडामा मात्र केन्द्रित हुन्छन्।
तिब्बतमा चारी हिमाल छ। तिब्बतीहरू त्यहाँ हरेक १२ वर्षमा एकपटक पुग्छन्। त्यहाँ लोपा जातका एक बार्बरिकजस्ता आदिवासी समुदाय बस्छन्। उनीहरूको ठाउँ भएर जान कर तिर्नुपर्थ्यो। त्यस्तो करका रूपमा चौंरीगाई बुझाउनुपर्थ्यो। लोपा समुदायले चौंरीगाई पाउनेबित्तिकै त्यसलाई काट्थे, त्यसको मासु खान्थे र रगत पिउँथे। हामी मनुष्यका रूपमा त्यस्तो ठाउँमा जन्मेका छैनौं, त्यसैले भाग्यमानी छौं।
ठूलो अपांगताबिना जन्मिनु – यदि लाटोबुंगो वा आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने, बोल्न नसक्ने, अन्य कुनै शारीरिक, मानसिक वा सामाजिक कारणले अपांग भएका भए हामीलाई धर्म सिक्न र अभ्यास गर्न ज्यादै अवरोध हुने थियो।
मिथ्या दृष्टियुक्त स्थानमा जन्मिनु – त्यस्तो ठाउँमा हामी जन्मेका छैनौं जहाँ मानिसहरू आध्यात्मिक अभ्यास (त्यसमा पनि बुद्धधर्म) लाई समयको बर्बादी र मूर्खतापूर्ण कामको रूपमा लिन्छन्, उनीहरूका लागि पैसा कमाउनु वा त्यस्तै केही मात्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यस्ता अक्षणबाट मुक्त मानव जीवन हामीले पाएका छौं। यो कुराप्रति र यसलाई पाउने हेतुहरूप्रति पनि सचेत छौं भने हामी डबल भाग्यमानी हौं। कैयौं मानिसलाई अमूल्य मानव जीवन पाए पनि भविष्यमा फेरी यस्तो जन्म पाउने हेतुहरू के हुन सक्छन्, थाहा हुँदैन।
अमूल्य मानव जीवन पाउन कठिन हुने कुरालाई हामी केही उपमाहरूको मद्दतले बुझ्न सक्छौं। जस्तै, कुनै ऐनामा बालुवा फ्याँक्दा त्यसका टुक्राहरू त्यहाँ अडिने सम्भावना जति कम छ, त्यति नै दुर्लभ यो मानव जीवन छ।
यी विषयहरूमा चिन्तन गर्दा अहिले हामीलाई प्राप्त यो मानव जुनी कति अनमोल उपलब्धि रहेछ भन्ने कुराको बोध हुन्छ। हामीले के जान्नु जरुरी छ भने यो जीवन केवल एकपटक मात्रै पाइन्छ। अहिले भारतमा कैयौं करोड मानिस छन्। उनीहरूमध्ये कति थोरैलाई धर्मको अभ्यास गर्न रुचि होला! त्यसैले यो अवसर कति दुर्लभ छ भनेर जान्नु पर्छ।
एकपटक एक लामाले अमूल्य मानव जीवन पाउनुका कठिनाइबारे प्रवचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो। श्रोताहरूमाझ मंगोलियाबाट आएका एक व्यक्ति थिए। उनले भने, “तपाईंलाई मानव जीवन पाउन कठिन छ भन्ने लाग्छ भने चीन गएर हेर्नुस् त्यहाँ कति मानिस छन्!” यो त मलाई सोभियत संघ जाऊ भनेजस्तै भयो!
ध्यानको बेला यस्ता कुराहरूमा चिन्तन गर्नु उपयोगी हुनेछ।
अमूल्य मानव शरीरको सदुपयोग गर्दै अर्थपूर्ण जीवन जिउनु
वर्तमान मानव शरीर पाउन विगतका जीवनमा हामीले कति कडा परिश्रम गरेका रहेछौं भन्ने कुराको चिन्तन गर्यौं भने यो जीवनलाई सकेसम्म अर्थपूर्ण बनाउने हुटहुटी उत्पन्न हुनेछ। कुनै पहाडमा ठाडो उकालो चढ्दै गर्दा आफूसँग भएको सामान बीचमै फालिदियौं भने त्यो गुड्केर फेरी तल फेदमै पुग्नेछ। हामीले यो जीवन प्राप्त गर्न विगतमा गरेको प्रयत्न भनेको त्यस्तै पहाडको बीचसम्म सामान बोकेर पुर्याएजस्तै हो, यदि त्यसलाई सम्हालेर राखेनौं र फालिदियौं भने त्यो त्यसै खेर जानेछ।
अहिले यो अमूल्य मानव शरीर हामीसँग छ। भविष्यमा पनि यस्तै शरीर प्राप्त होस् भनेर मात्र पुग्दैन। यो हामीसँग भएकै अवस्थामा यसको सदुपयोग गर्दै सम्यक सम्बोधिप्राप्त बुद्ध बन्ने दिशामा प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसो नगर्नु भनेको चामलको बोरालाई छेउमा राख्ने तर त्यहाँको चामल नखाने, बरु अर्को जन्ममा पनि त्यस्तै बोरा पाइयोस् भनेर प्रार्थना गर्नेजस्तो मात्रै हुनेछ। त्यसैले हामीले वर्तमान मानव जीवनको पूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्छ।
यो शरीरलाई हेरौं। यो कुनै चट्टान वा फलामले बनेको होइन। बनेको भए अलि लामो समय टिक्थ्यो होला। यो शरीरलाई काटेर भित्र के रहेछ भनेर हेर्यो भने रगत र आन्द्राभुँडी निस्कनेछ। मानिसहरू बजारमा मासुपसलबाट जनावरका भित्री अंग किनेर घरमा ल्याई झुण्ड्याउँछन्। हाम्रो शरीरभित्रका अंग पनि त्यस्तै हुन्। घडीको भित्री पूर्जाहरूजस्तै हाम्रो शरीरका भित्री अंगहरू अति नाजुक छन्।
हामीले मृत्युका बारेमा सोच्यौं र कति मानिस मरे होलान् भनेर गन्न थाल्यौं भने कैयौं जपमालाहरू सकिनेछन्। म यहाँ धर्मशाला आएपछि मात्र कति तिब्बतीहरू मरे भनेर गन्ती गर्न थालें भने एउटा जपमाला त तुरुन्तै सकिनेछ।
संसारमा त्यस्तो कोही व्यक्ति छैन जो मानव शरीरका साथ जन्मेको होस् तर नमरेको होस्। रुखविरुवाहरू पनि मर्लान् त? भन्ने लाग्न सक्छ। तर त्यो पनि केही समयको कुरा मात्र हो। जन्मेपछि मृत्यु हुन्छ, त्यो नै प्रकृतिको स्वाभाविक नियम हो। यसमा कसैले केही गर्न सक्दैन। यहाँ यसरी जुटेर आउनुको निष्कर्ष के हो भने हामी छुटिनु पनि पर्छ। माथि गएपछि तल झर्नु नै पर्छ। एक दिन मर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन भन्ने जानेपछि हामीले मृत्यु नआउञ्जेल धर्मको जतिसक्दो धेरै अभ्यास गर्नु जरुरी हुन्छ।
हामीले आफ्नै मृत्युको चिन्तन गर्नु उपयोगी हुनेछ। कल्पना गर्नोस्, तपाईं एकदमै विरामी हुनुहुन्छ, तपाईंका मांसपेशीको रंग उडेर घिनलाग्दो भएको छ, र तपाई एकदमै दुर्बल हुनुभएको छ। तपाईंका सबै नातेदार रुँदै छन्, ज्यादै नराम्रो भयो भनेर विलाप गर्दैछन्। डाक्टर आउँछ र तपाईंलाई औषधि दिन्छ। तर उ पनि अवस्था साह्रै नराम्रो छ भनेर चुक्चुकाउँछ मात्र।
हामी कुनैबेला पनि मर्न सक्छौं
तपाईं कहिले मर्नुहुन्छ, कुनै निश्चित छैन। कहिलेकाहीँ सेतै फुलेका बुढाबुढीले आफ्नो सन्तानको अन्तिम संस्कार गर्दैगरेको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ सामान्य खानेकुरा खाँदाखाँदै मानिस गला लागेर मर्छन्।
तिब्बतमा दिइने एक उदाहरण लिऊँ। कुनै मानिस मासु खाँदैछ र केही टुक्रा भोलि बिहान खान्छु भनेर साँचेर राख्छ। तर के थाहा, त्यो मासुको टुक्राको आयु उसको भन्दा लामो हुने हो कि? अर्को उदाहरण ः सिम्ला (भारत) का एकजना आलु किसान मेरा परिचित थिए। एक दिन उनी लञ्चका लागि भुटेको रोटी बनाउँदै थिए। रोटी बनाउँदा बनाउँदै उनको मृत्यु भयो। रोटी पाक्न नै पाएन।
आफूले चिनेका र मरिसकेका मानिसहरूको स्मरण गर्ने हो भने अनित्यता र मृत्युबोध गर्न सहज हुनेछ। त्यसबारे लेखिएका पुस्तक मात्र पढेर त्यति लाभ हुँदैन।
मृत्युका बेला धर्म मात्र काम लाग्छ
मृत्यु ध्यान किन महत्त्वपूर्ण छ? किनभने यसबाट हामी जान्दछौं कि जीवनमा सबैभन्दा सारपूर्ण काम भनेको धर्मको अभ्यास मात्र हो।
भौतिक वस्तुहरूबारे सोचौं। तपाईंले कुनै पनि चीज आफूसँग लैजान पाउनुहुन्न। मानिलिऊँ तपाईं एक धनी व्यापारी हुनुहुन्छ र तपाईंले धेरै पैसा कमाउनुभएको छ। मरेपछि त्यसले के फरक पर्छ? हद से हद तपाईंको मृत शरीरलाई जलाउनुअघि ढाक्ने कपडा अलिकति महंगो किनिदेलान्। तर एक व्यापारीका रूपमा तपाईंले अनेक देश घुमेर धन कमाउनलाई जति अकुशल कर्म गर्नुभएको छ, त्यसको कुनै सीमा नै हुँदैन।
तपाईंका कैयौँ नोकरचाकर होलान्, सेनाको जर्नेलका रूपमा तपाईंले १००,००० सैनिकलाई कमाण्ड गरिरहनुभएको होला, तर मृत्युपछि तपाईंका साथ कोही आउन सक्दैन। देशैभरी तपाईंका नातेदार छन् भने पनि केही काम लाग्दैन। हद से हद उनीहरूले गर्नसक्ने भनेको तपाईंको मृत्युसय्याछेउ उभिने हो। त्यो भीडले तपाईंको मृत्युपछिको शान्तिपूर्ण प्रस्थान र पुनर्जन्मलाई बिथोल्ने काम मात्र गर्छ।
मृत्युका बेला तपाईंलाई सहयोग गर्नसक्ने एउटै मात्र कुरा भनेको धर्मको अभ्यास हो। तपाईंले सिर्जनात्मक व्यवहार (कुशल कर्म) मार्फत पर्याप्त मात्रामा सकारात्मक कर्मको उर्जा सञ्चित गर्नुभएको छ भने त्यसले भविष्यका जन्ममा असाध्यै सहयोग गर्छ। नकारात्मक कर्मको उर्जाले पुनर्जन्मलाई निकृष्ट बनाउँछ। हामीलाई के कुरा साँच्चिकै काम लाग्छ भन्ने बुझ्न मृत्युसम्म पनि पुग्नुपदैन। तिब्बतको उदाहरण लिऊँ – कैयौं तिब्बतीहरू आफ्नो ठाउँमा धनसम्पन्न थिए। तर त्यहाँबाट हिँड्दा उनीहरूसँग केवल आफ्नो ज्ञान र अन्तर्मनका गुणहरू मात्र थिए। त्यसैले हामीले आफ्नो जीवनभरी धर्मको विशुद्ध अभ्यास गर्नुपर्छ र क्षणिक सांसारिक क्रियाकलापमा समय खेर फाल्नु हुँदैन।
यो जीवनका सबै क्षणिक सांसारिक क्रियाकलापलाई गहुँको बाहिरको खोस्टाजस्तो अर्थहीन जानेर व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसको सार नै छैन। यहाँ हामीले गर्ने सबै क्रियाकलाप केटाकेटीले बालुवाको महल बनाएजस्तो मात्र हो। जब उनीहरूको खेल सकिन्छ, त्यसलाई त्यत्तिकै छाडेर हिँड्छन्। सांसारिक क्रियाकलापलाई हामीले त्यसरी नै लिनुपर्छ।
यी विषयहरूबारे चिन्तन गर्नुभयो भने तपाईंको धर्म अभ्यासलाई धेरै सहयोग पुग्छ।
सबै सांसारिक क्रियाकलापलाई अर्थहीन र कुनै ठूलो सार नभएको जानेपछि धर्मको अभ्यास हाम्रा लागि एकमात्र महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने जान्दछौं। धर्मको अभ्यास त्यस्तो अभ्यास हो जो तपाईंको भविष्यको जन्मका लागि पनि हितकारी हुन्छ। “अहिले मसँग यो अमूल्य मानव शरीर छ। भविष्यमा कुनै नीच लोकमा पुनर्जन्म नहोस् भनेर यसको सदुपयोग गर्नेछु,” यस्तो प्रेरणाले हामीले काम गर्यौं भने त्यो आफ्नो मानव जीवनको सदुपयोग न्यूनस्तरमा गरेको ठहरिनेछ।
शीललाई कडाइका साथ पालना गर्यौं भने ती निम्नकोटीका लोकहरूमा जन्मिनबाट बचिन्छ। तर शील पालनाको जतिसुकै दृढ इच्छा राखेपनि सामान्यतया यसमा कमजोरी भइहाल्छ। त्यसैले ती नीच लोकहरूमा झर्नबाट बच्न हामीले आफूलाई क्लेशहरूबाट पनि मुक्त गर्नुपर्छ। यो असाध्यै मैलो कपडा धोएजस्तै हो। प्रारम्भमा हामी अलि कम बल लगाउँछौं। धुँदै जाँदा बल बढाउँदै लैजानु पर्छ। क्लेशबाट मुक्तिका लागि पनि तपाईंले विस्तारै र आरामपूर्वक काम शुरु गर्नुपर्छ। क्रमशः आफ्नो प्रयास र बललाई बढाउँदै पूर्ण क्षमताका साथ क्लेशमुक्तिको काम गर्नुपर्छ। त्यसैले शील पालनादेखि तपाईंले विस्तारैसँग काम शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र क्षमता बढाउँदै पूर्णरूपमा क्लेशहरूबाट पनि मुक्तिको प्रयत्न गर्नुपर्छ। यसरी क्रमैसँग नगए तपाईंको प्रयत्न चाँडै क्षीण भएर समाप्त हुन सक्नेछ।
तीनप्रकारका नीच लोकहरूमा जन्मिनबाट बच्न शीलको पालना गर्दै अभ्यास थाल्नु धर्मको प्रारम्भिक स्तरको प्रेरणा हो।
तर नीचलोकहरूमा जन्मिनबाट बच्यौं र मनुष्य वा देवताका सुखसयल र भोगविलासपूर्ण उच्च लोकमा जन्मियौं भने पनि ती सांसारिक लोक नै हुन्। त्यहाँ हुने पुनर्जन्ममा पनि दुःख अवश्य हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यसको विस्तृत व्याख्या लाम–रिमको शिक्षामा दिइन्छ। यहाँ एक उदाहरणबाट बुझौं – मानिलिऊँ तपाईं बाहिर घाममा उभिनुभएको छ र अति गर्मी छ। त्यसैले तपाईं घरभित्र पस्नुहुन्छ, तर घरभित्र चिसो छ। तपाईं गर्मीको दुःखबाट त बच्नुभयो, तर जाडोको दुःख शुरु भयो। त्यस्तै संसारिक जीवनका कुनै अवस्था पनि दुःखबाट मुक्त छैनन्।
क्लेशहरूका कारण हामी संसारको चक्रमा रुमल्लिरहन्छौं, अनियन्त्रित तवरले हाम्रो पुनर्जन्म भैरहन्छ। यसको जड भनेको हाम्रो भ्रम हो जसका कारण चीजहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व छ भन्ठान्दै त्यसैलाई पकडेर बस्छौं। यो रुखको जरा जस्तै हो, पक्रेर बस्ने। संसारको चक्रमा घुम्नु भनेको एक गोलचक्करभित्र चक्कर मारिरहनु जस्तै हो, जतिपटक घुमेपनि हामी कहीँ पुग्दैनौं। यसबाट निस्कने एकमात्र उपाय भनेको उफ्रेर फुत्त बाहिर निस्कनु नै हो। यसका लागि हामी आर्य हुनुपर्छ, अर्थात् उन्नत क्षमतायुक्त हुनुपर्छ। यसको मतलब त्यस्तो क्षमता हो जसले धारणाहरूबाट मुक्त प्रज्ञाका साथ चीजहरूको स्वभावशून्यतालाई देख्न सकोस् र हामीले सोचेजस्तो “आत्मा” नहुने कुरा जान्न सकोस्। यो शून्यता देख्ने प्रज्ञा हो।
हाम्रो चित्तमा निरन्तर यस्तो शून्यताबोध स्थापित गर्न शमथ अर्थात् चित्तलाई स्थिर र शान्त बनाउने अभ्यास (समाधिको अभ्यास) को आवश्यकता हुन्छ। यसका लागि नैतिक आत्म–संयम अर्थात् शीलको अभ्यास जरुरी हुन्छ। शील, समाधि र प्रज्ञा – यी तीन उच्च अभ्यास हुन् जसले हामीलाई अनियन्त्रित सांसारिक पुनर्जन्महरूबाट बाहिर निकाल्छन्। यी तीनको अभ्यास गर्यौं भने हामी संसारमा चक्कर लगाइरहने कामबाट उन्मुक्ति पाउन सक्छौं।
आर्यको रूपमा आफूलाई स्तरोन्नति गरेका मानिसहरूलाई तीन प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ ः
ती जसले दर्शनमार्ग चित्तको अवस्था हासिल गरिसकेका छन्।
ती जसले भावनामार्ग चित्तको अवस्था हासिल गरिसकेका छन्।
ती जसले अशैक्ष चित्त अर्थात् थप शिक्षाको आवश्यकता नपर्ने चित्तको अवस्था हासिल गरिसकेका छन्।
दर्शनमार्ग चित्तको अवस्थामा पुगेका व्यक्तिले शून्यतालाई धारणातीत र स्पष्ट ढंगले देख्न सक्छन्। जो भावनामार्ग चित्तको अवस्थामा पुगेका छन्, उनीहरू उत्तरोत्तर ध्यान साधनाका माध्यमबाट स्वयंलाई शून्यताको यस्तो धारणातीत अनुभूतिका लागि अभ्यस्त पार्छन्। ध्यान साधना गर्दा गर्दा आफ्नो चित्तलाई शून्यताको यस्तो अनुभूतिमा पूर्णतः अभ्यस्त गर्नुभयो भने तपाईंले आफ्नो निर्वाणमा बाधा पुर्याउने सबै भावनात्मक व्यवधानहरूलाई चित्तबाट पूरै अलग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा तपाईं एक अर्हत वा निर्वाणप्राप्त सत्त्व हुनुहुनेछ।
मैत्री र करुणा
तर तपाईंले आफूलाई मात्र मुक्त गराएर पुग्दैन, किनकि सबै सीमित क्षमताका सत्त्वहरू तपाईंजस्तै दुःखपूर्ण अवस्थामा छन्। सबै सत्त्व दुःखमै छन्, र उनीहरू सबै त्यसबाट उन्मुक्ति चाहन्छन्। यस अर्थमा सबै एकसमान छन्। यदि हामीले ती सबै सत्त्व दुःखबाट मुक्त होऊन् भन्ने भावना गर्ने चित्तको विकास गर्छौं भने त्यो “करुणा” हो। तर सबै सत्त्वका लागि यस्तो भावनाको विकास तपाईंले तबमात्र गर्न सक्नुहुनेछ जब स्वयं आफ्ना दुःखका बारेमा लामो समयसम्म ध्यान गरेर अवस्था कति भयावह छ भन्ने बोध गर्दै यसबाट छुटकारा पाउने अठोट (नैष्क्रम्य) को विकास गरिसक्नुभएको हुनेछ। यसरी आफ्ना लागि दुःखबोध र त्यसबाट मुक्तिको कामना गरिसकेपछि तपाईंले त्यस्तै भावना सबै सत्त्वका लागि निर्देशित गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो करुणा हो।
नैष्क्रम्यमा म सबै दुःखबाट मुक्ति पाउँ भन्ने भावना हुन्छ भने करुणामा अरू सबैलाई दुःखबाट मुक्ति दिलाउने भावना हुन्छ। करुणा र मैत्रीबीचको फरक चाहिँ के हो भने करुणामा हामी “ओहो, सबै सत्त्व दुःख र दुःखका हेतुबाट मुक्त भैदिए कति राम्रो हुने थियो” भन्ने चाहना राख्छौं भने मैत्रीमा “सबैजना सुख र सुखका हेतुहरूले युक्त होउन्” भन्ने चाहना राख्छौं।
समता र बोधिचित्तको विकास कसरी गर्ने
हामीमा मैत्री र करुणाको भाव किन देखिँदैन? किन हामी सबै सत्त्व दुःखबाट मुक्त होऊन् र सुख प्राप्त गरून् भनेर कामना गर्न सक्दैनौं? किनभने हाम्रो चित्त समतायुक्त छैन। यो मिलेको छैन, उबडखाबड छ। यसमा पहाडका चुचुरा पनि छन्, खोँच पनि छन्। चित्तको यो विषमताको अर्थ के हो? यसको अर्थ के हो भने हामी आफ्ना नातेदार र मित्रहरूप्रति अति नै आसक्त छौं, तर आफ्ना शत्रु वा मन नपर्ने मानिस देख्ने बित्तिकै असाध्यै दुराशयले भरिन्छौं।
त्यसोभए एकनाससित सम्म मिलेको बाटो कसरी बनाउने त? एउटा उदाहरणमार्फत बुझौं – मानिलिऊँ तपाईंलाई कसैले हिजो एक सय रूपैयाँ दियो र आज अर्कै मानिसले फेरी एक सय रूपैयाँ दियो। हिजो पैसा दिने मानिसले आज बिहान आएर तपाईंलाई अनुहारमा एक मुक्का हानेर गयो। आज पैसा दिनेले चाहिँ हिजो बिहान एक मुक्का हानेर गएको थियो। अब तपाईं कसलाई माया गर्नुहुन्छ र कसलाई घृणा?
हाम्रा शत्रु र मित्र यस्तै हुन्। अहिलेका शत्रुले विगतमा हामीलाई असाध्यै धेरै कल्याण गरेका हुन सक्छन्, र भविष्यमा पनि गर्न सक्छन्। त्यस्तै अहिलेका मित्रले विगतमा हामीलाई असाध्यै धेरै हानि पुर्याएका र भविष्यमा पनि त्यस्तै हानि पुर्याउने हुन सक्छन्। यो केवल समयको खेल मात्र हो।
अर्को उदाहरण लिऊँः मानिलिऊँ तपाईंले कुनै मानिसलाई असाध्यै मन पराएर विवाह गर्नुभयो। तर त्यो मानिस खासमा नरभक्षी वा मानिसको भेषमा नरपिशाच वा ब्वाँसो रहेछ। एक रात उ आफ्नो असली रूपमा आयो र तपाईंलाई खाइदियो।
तपाईंले कुकुरलाई हिर्काउनुभयो भने त्यसले तपाईंलाई भुक्छ र टोक्छ। त्यस्तै यदि तपाईं कुनै शत्रुप्रति क्रोधित हुनुहुन्छ भने तपाईंले गर्ने प्रतिक्रिया उक्त कुकुरले गर्नेभन्दा भिन्न भएन। हामीले आफ्नो चित्तको यस्तो विषमता हटाउनुपर्छ। यस्ताखाले आसक्ति र घृणाबाट मुक्ति पाउनुपर्छ र चित्तमा समताको विकास गर्नुपर्छ। समतायुक्त चित्तमा हामी मैत्री र करुणाको विकास गर्न सक्छौं। यो भनेको बाटो सम्याइसकेपछि त्यसमाथि कालोपत्रे गरेजस्तै हो। त्यस्तो बाटोमा कार सजिलोसँग गुड्न सक्छ।
पहाडका उबडखाबड चट्टान फुटाएर सम्म परेको बाटो बनाउन तपाईंले डाइनामाइटजस्तै शक्तिशाली विचारहरू लिनुपर्छ। ती विचार के होलान्? कैयौं अबोध जीवहरूले हामीलाई लगाएको गुनको स्मरण गरौं। मानिलिऊँ तपाई दुध पिउनुहुन्छ। त्यो गाई वा भैंसीबाट आउँछ। उनीहरू चर्न जान्छन्, घाँस खान्छन्, पानी पिउँछन्। हामीले गर्ने भनेको उनीहरूबाट दुध निकाल्ने मात्र हो। खरायो र मुसालाई मानिसले मेडिकल अनुसन्धानमा प्रयोग गर्छन्। हाम्रो उपचार गर्ने औषधिका लागि ती खरायो र मुसाले आफ्नो ज्यान दिएका हुन्छन्।
त्यस्ता अबोध जीव पनि छन् जसलाई हामी आफ्नो शत्रु ठान्छौं, जसले हामीलाई हानि पुर्याउँछन्। तर उनीहरूले गरेको हानि र लगाएको गुनको तुलना गर्ने हो भने हानिभन्दा गुन कैयौं गुणा बढी हुन्छ। खासमा त्यस्तो हानिले पनि हामीलाई सहयोग नै गरेको हुन्छ। बुद्ध बन्नका लागि हामीसँग धैर्य हुनुपर्छ। यसको अभ्यास गर्न अप्ठ्यारा मानिस नै चाहिन्छन्। सबैले हामीसँग राम्रो व्यवहार गर्नेभए हामीले धैर्यको विकास गर्नसक्ने थिएनौं। जो हामीसँग रिसाउँछन्, उनीहरू न्यून क्षमताका अबोध मानिस हुन्, बुद्ध होइनन्। तिनीहरूले नै हो हामीलाई धैर्यवान बन्न सहयोग गर्ने। अतीश तिब्बत जाँदा भारतबाट एक अत्यन्तै घामड मानिसलाई आफ्नो साथमा लिएर जानुभएको थियो। उनले अतीशलाई सधैँ सताइरहन्थे। कसैले उहाँलाई किन यस्तो मानिसलाई साथ ल्याउनुभएको भनी सोधे। उहाँको जवाफ थियो – धैर्यको अभ्यास गर्न। त्यसैले बुद्धले हामीले लगाउने गुन र सीमित क्षमताका अबोध जीवले लगाउने गुनमा तात्त्विक भिन्नता छैन। शान्तिदेवले बोधिचर्यावतारमा यही कुरालाई पुष्टि गर्नुभएको छः
बुद्धलाई रिस नउठ्ने कारण छ। त्यो के भने उहाँको चित्त एकाग्र छ, सबै क्लेशबाट मुक्त समाधिमा स्थित छ। यस्तो एकाग्र चित्त भएका कारण बुद्धलाई रिस उठ्दैन। त्यसैले हामीले पनि यस्तै चित्तको विकास गर्नुपर्छ। हरेक बिहान हामीले निम्नानुसार दुई विचार मनमा लिँदै उठ्नुपर्छः
आज म अरूलाई रिस उठाउने काम गर्दिन।
म आफू पनि अरूका कारण रिसाउँदिन।
यस्तो भावनामा आफूलाई अभ्यस्त गर्दै लग्यौं भने हामी आफ्ना क्लेशहरू कम गर्न सक्छौं र अन्ततः सबै क्लेशहरूलाई सधैंका लागि निर्मूल गरेर बुद्ध बन्न सक्छौं।
बुद्धलाई खुशी पार्न के गर्नुपर्ला? कसैले सोध्यो भने जवाफ हुनेछ – यी सीमित क्षमतायुक्त अबोध जीवहरूप्रति दया गर्ने र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने। बुद्धलाई वास्तवमै मनपर्ने कुरा यही हो। आमाबुबालाई खुशी पार्न उनीहरूका छोराछोरीलाई माया गर्नुपर्छ। आफूलाई गरेको मायाले भन्दा आफ्ना छोराछोरीलाई गरेको मायाले आमाबुबाको मन प्रफुल्लित हुन्छ। त्यस्तै बुद्धलाई पनि आफूलाई मात्र होइन, सबै अबोध सत्त्वहरूलाई गरेको मायाले बढी खुशी तुल्याउँछ। यो विश्लेषणका आधारमा हामीले बोधिचित्तको यस्तो लक्ष्य लिनुपर्छ – “म सबै अबोध सत्त्वको हितका लागि बुद्ध नै बन्नेछु।”
बुद्धत्त्व प्राप्त गर्ने मात्र होइन, यसै जन्ममा, सकेसम्म अहिल्यै, सबै सत्त्वको हितका लागि म बुद्ध नै बन्नेछु – यस्तो उच्च आकांक्षाका साथ हामीले काम गर्नुपर्छ। बुद्धले यसै जीवनकालमा बुद्धत्त्व प्राप्त गर्नसक्ने उपायका बारेमा शिक्षा दिनुभएको थियो। त्यो उपाय के हो? त्यो उपाय तन्त्र हो। यो बाटोमा हिँड्यो भने यसै जीवनकालमा बुद्धत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्छ।
तर यसरी यही जीवनकालमा बुद्धत्त्व प्राप्त गर्ने उच्च आकांक्षा राखेपनि यो काम सजिलो छ भनेर चाहिँ नसोच्नुहोला। सजिलो छैन, किनभने हामीले अनादिकालदेखि असंख्य अकुशल कर्मको संग्रह गरेर राखेका छौं। तन्त्र छोटो बाटो त हो, तर यो अत्यन्तै कठिन छ। हवाइजहाज चढेर छिट्टै पुगेजस्तै यो छोटो बाटो हो भनेर नझुक्किनु होला, यो त्यति सजिलो कुरा होइन। जेचुन मिलारेपाको उदाहरण लिने हो भने उहाँले आफ्ना गुरु मार्पासामु अत्यन्तै कठिन परीक्षाबाट गुज्रिनुपरेको थियो। उहाँले कैयौँ टावर बनाउनुभयो, पिटाइ खानुभयो, अनगिन्ती पीडाबाट गुज्रिनुभयो। ती सब कठिनाइलाई पार गर्दै उहाँले एकै जन्ममा पूर्ण बोधि प्राप्त गर्नुभयो। तर मिलारेपाले भोगेका कठिनाइको एक अंश पनि भोग्ने तत्परता हामी देखाउँदैनौं।
यदि तपाईंसँग यही एक जन्ममा पूर्ण बोधि प्राप्त गर्ने अत्यन्तै प्रबल आकांक्षा छ र जस्तोसुकै कठिनाइको सामाना गर्न तैयार हुनुहुन्छ भने निरन्तरको साधनामार्फत बुद्धत्त्व नै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो सम्भव छ।
अमूल्य मानव शरीरका साथ जन्मिएका हामीले उच्चलोकमा पुनर्जन्म, निर्वाण र बोधि प्राप्तिको उद्देश्यले यो जीवनलाई धर्म अभ्यासमा सदुपयोग गर्न सक्छौं। यसका लागि एक क्रमिक मार्ग अपनाउनु पर्छ। यसभित्र दश अकुशल कर्मबाट बच्नु, आफूलाई क्लेशहरूबाट मुक्त राख्नु, तथा यो संसारको चक्रबाट मुक्त हुने अठोट र बोधिचित्त लक्ष्यका साथ समाधि र शून्यताको धारणातीत अनुभूतिको प्राप्ति पर्छन्।
करुणा मृत्यु मार्गक्रम अमूल्य मानव जीवन षट्पारमिता
भारतको धर्मशालामा सन् १९७६ अक्टोबरमा आयोजित सेमिनारबाट। अनुवाद अलेक्जेन्डर बर्जिन। नेपाली अनुवाद अरुण पौडेल।